जुम्ल्याहा बच्चा तर फरक–फरक पिता, पति–पत्नीबीच झगडा ! - Everest Dainik - News from Nepal
जुम्ल्याहा बच्चा तर फरक–फरक पिता, पति–पत्नीबीच झगडा !
काठमाडौं, चैत १७ । चीनमा एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी छन्। तर पिता फरक-फरक भएको पत्ता लागेको छ। डीएनए परीक्षण गर्दा पिता फरक–फरक भएको पत्ता लागेको हो। यस कुराको खुलासा हुँदा डाक्टर पनि अचम्मित परेका छन्।
जब दम्पती आफ्नो बच्चाको दर्ताका लागि शियामेन प्रहरीकहाँ गए, त्यसपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो। डीएनए परीक्षपछि महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिएर अन्य पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको खुलासा भएको हो।
श्रीमानलाई यो विषयको जानकार हुनेबित्तिकै उनले श्रीमतीसँग सोधपुछ गरेका थिए। सोधपुछपछि महिलाले अर्को व्यक्तिसँग पनि सम्बन्ध भएको स्वीकार गरेकी थिइन्। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ।
ट्याग्स: China, twins baby